Indumezulu yedili lomculo oThukela | News24
Indumezulu yedili lomculo oThukela
Usomahlaya waKwaDukuza nabaculi beqembu iFrolic032 bazobe benza abadume ngazo oThukela ngomqibelo.PHOTO: nkosinathi dube
INDAWO yaso Thukela ngaphansi kwesigceme saku Ward 25 eDoornkop izobe inendumezulu yomcimbi womculo obizwa nge Fill up Sakhuxolo Sports Ground ngomqibelo zi-4 kuNtulikazi.
Lomcimbi nohlelwe I Frolic 032 kanti kuyobe kuboshelwe osaziwayo abahamba phambili kulesisifundazwe endimeni yozomculo kanye neyozokuncebeleka.
Okugqame kakhulu ukukhula ngesivinini komculo odidiyelwa abaculi bakhona laKwaDukuza njengoba kulomcimbi kuyobe kuboshelwe amaciko akhona endaweni.
Iqembu elizibiza nge Frolic 032 elenza umculo we Durban Kwaito lizobe lishiyelana inkundla namanye amaciko aqhamuka khona KwaDukuza. Omunye wabahle base Frolic uthe lomcimbi uzoqala ngehora lesi-9 kanti kuboshelwe uThokozani T’zozo Zulu, usomhlaya waKwaDukuza osanda kunqoba indondo kumaSATMA uHalo M (umphathi hlelo), Daniel olingisa kuGenerarions the legacy, u DJ Nzie kanye nabanye abaningi.
Uphinde wagcizelela ukuthi kungenwa ngoR20 esangweni kanti iAfter Party yaloMcimbi izobe ibanjelwe endaweni edla ubhedu kulezinsuku I Ten 11 lounge KwaDukuza. Ngeminye imininingwane kungashayelwa lenamba yocingo 079 555 7660.